Ungcoliseko lwendalo-Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
Inkqubo yokuLawulwa koNgcoliseko kokusiNgqongileyo
Izicelo: i-iron, i-petrochemical, ikhemikhali, i-coke, amayeza nezamachiza, iimayile zephepha, iintsimbi ezingezizo ezothusayo, izinto zokwakha, amandla ombane, unyango lomjelo wamanzi wamanzi, imigodi.
Faka imodyuli yokujonga ukusetyenziswa kwamandla, enokujonga ukusetyenziswa kombane, ixesha lokwabelana nabanye kunye nokusetyenziswa gwenxa kwamandla kwezixhobo zonyango lokuhambisa amanzi ngexesha elifanelekileyo.
Ukujongwa kweliso lokwenyani, isilumkiso kwangethuba, uhlalutyo kunye nolawulo lwemveliso yeshishini, ukuvalwa, ukuveliswa okulinganiselweyo, ukusetyenziswa kwamandla kunye nokulawulwa kokungcola ngaphandle kokugunyazwa kunye nokusebenza komthwalo ophantsi.
Izicelo: i-iron, i-petrochemical, ikhemikhali, i-coke, amayeza kunye nezamayeza, iimayile zamaphepha, iintsimbi ezingezizo ezothusayo, izinto zokwakha, amandla ombane, unyango lomjelo wamanzi omhlaba, imigodi.
Ikhasi lasekhaya leqonga libonisa iprofayili yenkampani, amanani obalo lombane, imbali yokusebenza kwezinto zoncedo longcoliseko lomoya, kunye nembali yokusebenza kwamancedo onyango.
Bonisa inani lamashishini axhunyiwe, inani lezixhobo kunye neendawo zokubeka iliso, imeko yokusebenza yangoku yezixhobo zokulawula ungcoliseko kunye nenqanaba elingaqhelekanga lokumiswa kwemveliso kunye nokusikelwa umda kwemveliso.
——Izibalo zokusetyenziswa kwamandla
Igrafu ebonisa ukusetyenziswa kombane kwenkampani izolo nanamhlanje.
——Imbali yokusebenza kwamaziko avelisa ungcoliseko
I-histogram ebonisa inani leeyure zokusebenza kwezixhobo ezivelisa ukungcoliseka izolo nanamhlanje.
——Imbali yokusebenza kwamaziko olawulo longcoliseko
I-histogram ebonisa inani leeyure zokusebenza kweendawo ezilawula ukungcola izolo kunye nanamhlanje.
Inkqubo yokulawulwa kombane yemveliso yefektri ilungele ukubeka iliso ekusetyenzisweni kombane kweefektri zokwenza imveliso kumashishini ahlukeneyo anjenge-elektroniki, iimoto, intsimbi, oomatshini, ukutya, amayeza kunye namanye amashishini.
Ukubeka iliso ngexesha
Qokelela imiqondiso yokusetyenziswa kombane kwindawo, unokujonga amanani onke amanqanaba eshishini, izixhobo zomsebenzi, indawo yokubeka iliso, kubandakanya imeko yemveliso, imeko yesixhobo, yangoku, umbane, ukusetyenziswa kombane, amandla, njl. Njl. namhlanje ijika ibonisiwe. Unokukhetha ixesha elithile kwaye uvelise ijika. Ukusetyenziswa kwamandla kunye nee-curves zamandla ziqukethe ukuqala kwesixhobo kunye nokumisa imibundu, kunye nokusetyenziswa kwamandla kwamandla kwishishini kubonisa umqobo wokuvalwa kwenkampani.
Ngokwesiqalo esimisiweyo esimisiweyo kunye nokumiswa kwemigangatho, gweba ukuba ingaba ixesha lokuvelisa liyahambelana kunye nexesha lokusetyenzwa kwendawo yokulawula ukungcola, kunye nokuba kukho ukungqubana kwexesha malunga nokumiswa kwemveliso kunye nesicwangciso somda wokuvelisa, njengoko kubonisiwe kumfanekiso2:
I-alarm yexesha lokwenyani
Ngokuhlalutya ulungelelwaniso, uhlalutyo lomda ongaphezulu, ukuqala kwexesha lokumisa, ukufumana ixesha elingaqhelekanga njengezixhobo zokhuselo lwendalo ezingavulelwanga, kuvalwe ngokungekho mthethweni kunye nokwenziwa, i-idling, ukunciphisa frequency, njl. Uhlolo lwexesha lokuphela kwemveliso kunye nokumiswa kwemveliso nako kunokulungiswa. Jonga njengomzobo3: